တရုတ်ကျေးဇူး မြင့်မိုရ်ဦး (သျှိုးလိုက်ရတု) | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျွန်တော်အောင်မင်း၊ အဆိုသွင်းသည်၊ ပြည်နှင်းဆပ်ကြပါဟု… သျှိုး။
ထုံးဖွေးဖွေးနှင့် အေးအေးလူလူ၊ စံတော်မမူကြပါနှင့်။ သျှိုး ။
တောင်အောက်သင့်ရာ၊ ရွှေ့ကြပါဟုမိန့်စာပို့ပြီ ငါတို့ကျေးဇူးရှင်တွေဖို့ …သျှိုး။
ကျေးဇူးရှင်များ၊တန်ခိုးထွားအောင် ပိုက်များသွယ်ကြီးသွယ်၍ … သျှိုး။
ဟိန်းပါသော်လဲ၊ ဒို့ငမွဲနှင့်၊ တန်လဲတန်နိုင်ပါ။
ကျေးဇူးရှင်တို့၊ ဆင်ကြပါစေ၊ ကျောက်စိမ်းသွေးနှင့်၊ အေးပါစေဟု … သျှိုး။
ကျေးဇူးရှင်တို့၊ ကြွေးဆပ်ဖို့… သျှိုး။
ပြည်ကိုလဲယူ၊ လူလဲယူ၊ ကြည်ဖြူပါသည်၊ ကြည်ဖြူသည်ဗျ .. သျှိုး။
3 Responses to တရုတ်ကျေးဇူး မြင့်မိုရ်ဦး (သျှိုးလိုက်ရတု)
mgoogyaw on November 28, 2012 at 11:19 pm
very very good. Burma is become one of the China division.We have to thank Chinese as our Thaye Zu Shin. Wan swe Wan swe,Par Par, Ar Shu, Ah Tae …doe yay.
မောင်ပျာလောင် on November 29, 2012 at 5:02 am
ကယ်ပါတိုင်းသားရဲ့ တရုတ်ကျေးဇူး မြင့်မိုရ်ဦး (သျှိုးလိုက်ရတု) ကို အားကြပြီး ကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာဆိုရှင်ကြီးဦးပုည ရဲ့ စေတီယဖွားဖက်တော် (စစ်ဗိုလ်ကြီးများ ကလိန်ဖွဲ့ တေးထပ်ခလေး) ကူးပေးလိုက်ပါတယ်၊ မလိန်တပ်တဲ့စစ်ဗိုလ်များ ဖတ်ကြည့်ပါ – – – စေတီယ လက်ထက်က၊ ဖွားဖက်တော်ရဲဗိုလ်၊ မဟုတ်မှသူဆိုတယ်၊ တကိုယ်လုံးမုသား၊ အလွဲမျာ့း ဘုရင်ငယ်၊ အလိမ်တွင်မင်းတရာ့ဖျား၊ အမှားမျာ့းဥသျှောင်ငယ်၊ အကောက်တောင်ပိုင်စား၊ သင်္ဘောပါ မှန်ကုန်များကို၊ မှားခေါ်လို့ ရောင်းစေ၊ မှန်ဆိုလျှင်အာကိုဖဲ့စေဟု၊ မောင်းလှည့်မယ့်လူစားပါပေတစ်မိုး၊ အောက်လူ့ ပြေမှာ သည်တဖေတပါးသာဖြင့်၊ မုသားစောင်ဖြူခြုံ၊ ပိန်းပိတ်လို့ မှုန်၊ မျက်လှည့်ကြီးညာဏ်စုံတယ်၊ လှည့်စားပုံဆန်းပေငဲ့လေး – –
(စာမျက်နှာ ၉၆၊ ဦးပုည၏ စာပန်းကုံးများ – ဒုတိယတွဲမှ)။
စစ်ဗိုလ်ကီးများ လိမ်တာလေ၊ ၀တို့ လိမ်တာမဟုတ်ဖူး၊
စစ်ဗိုလ်ကီးများ ရောင်းတာကြောင့် ၀တို့ ဝယ်တာလေ၊
စစ်ဗိုလ်ကီးများ အတွက် စုဘူးကို ၀တိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတာလေ၊
ဥပိုင်က သူ့ မှာရှိတဲ့ ဥတွေရောင်းတာလေ၊ ၀တို့ တန်ရာတန်ဘိုးပေးဝယ်တာဘဲ၊
စစ်ဗိုလ်ကီးတွေ လာရောင်းတဲ့ကုန်တွေက သူခိုးဈေးကလာတာ ၀တို့ ဘယ်သိမလည်း၊
၀တို့ ကိုဘဲ အပစ်ပုံချနေတယ်၊ လု့ တို့ စစ်ဗိုလ်ကီးတွေကိုတော့ ချိုမိုင်မိုင်လတု ကပြနေတုံးဘဲလား – – –
min thein kyaw on November 29, 2012 at 8:29 am
တရုပ်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်နံပါတ် ၁။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူ့ရန်သူနံပါတ် ၁။